Dzimwe Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga uye Seville nendege paLufthansa izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Dzimwe Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga uye Seville nendege paLufthansa izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Portugal Kuvhuna Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Nzvimbo dzinonyanya kukosha dzekuEurope dzinozopihwa dzimwe ndege dzinopfuura makumi masere kubva kuFrankfurt Rhein-Main Airport uye nendege dzinopfuura makumi mashanu kubva kuMunich.
Lufthansa inowedzera zana nemakumi matatu nendege kubva kuFrankfurt neMunich kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa dzezororo dzekuEurope.
Lufthansa inozivisa Kuwedzera kuwedzera kwendege dzekumba kubva kuFrankfurt kuenda kuBerlin, Hamburg, Munich uye kubva kuMunich kuenda kuBerlin, Hamburg neDüsseldorf.
Kutanga muna Gumiguru pachave neanosvika gumi nerimwe ezuva nezuva kubatana kubva kuFrankfurt kuenda kuBerlin pachinzvimbo chechipfumbamwe chekubatana kwemazuva ese.
Kudiwa kwakanyanya kwendege kunzvimbo dzekuzorora kunoenderera mberi mumazororo ari kuuya ematsutso. Mushure meAugust, Gumiguru inoratidza kuwedzera kwakanyanya kwenzvimbo dzekuchengetera kune zuva, nzvimbo dzekuEurope. Semagumo, Lufthansa iri kuwedzera chirongwa chayo chekubhururuka kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa dzine zuva kunyangwe.
Lufthansa nzvimbo kuSpain dzinonyanya kudiwa zvakanyanya. Naizvozvo, ndege yendege yave kupa dzimwe ndege ku Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga uye Seville. Portugal, Italy neGirisi zvakare vanoramba vachinyanya kufarirwa. Lufthansa saka iri kupa dzimwe nendege kuFaro neMadeira (ese maPortugal), pamwe nekuCagliari muSardinia, Catania muSicily, neRhodes (Greece) panguva yekuzorora kwenguva.
Kana vachironga, vafambi vemhepo vanofanirwa kugara vachiona zvakaringana uye zviripo zvekupinda uye yekuisa wega mitemo.
Uye zvakare, kudiwa kwekufamba nendege kuri kuramba kuchikura zvakanyanya pakufamba kwebhizinesi. Lufthansa Saka icharamba ichiwedzera kupa kwayo nendege kumigwagwa iyo inonyanya kukosha kune vafambi vebhizinesi. Kwemavhiki mashoma apfuura, ndege iyi yaive yatowedzera mabasa ayo muna Gumiguru ne45 muzana munzira kubva muFrankfurt kuenda kuBerlin, Hamburg, Munich uye kubva kuMunich kuenda kuBerlin, Hamburg neDüsseldorf, zvichienzaniswa naJuly.
Zvino, zvekuwedzera zvinongedzo zviri kupihwa nekukurumidza. Izvi zvinoreva kuti, pakati pezvimwe zvinhu, kutanga muna Gumiguru kuchave nekubatana kunosvika gumi nerimwe zuva nezuva kubva kuFrankfurt kuenda kuBerlin pachinzvimbo chekubatana kwemazuva mapfumbamwe.
Uyezve, pachave nendege gumi dzemazuva ese kubva kuFrankfurt kuenda kuHamburg pachinzvimbo chekubatana kwemazuva masere. Mamiriro acho akafanana neMunich: Panzvimbo pekubatana kwemazuva matanhatu, chirongwa chekubhururuka kubva ku "MUC" chinosanganisa anosvika mapfumbamwe ezuva nezuva kubatana kuDüsseldorf kutanga muna Gumiguru.
Zvakare, nekuwedzera chirongwa chekubhururuka, zvimwe zvinongedzo zvave kuwanikwa zuva rese. Vafambi vanowanzo kuda kubhururuka mangwanani kana manheru vanogona ikozvino kubatsirwa nakagadziridzwa nendege chirongwa.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 22
شات صوتي شات عراقي دردشة عراقية شات العراق شات ذهب